အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အထူးအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦး တက်ရောက် ဆွေးနွေး | Myanmar Digital News
May 18,2022 |09:32 |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦးသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီကျွန်း၌ မေ ၁၇ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် အာဆီယံစီးပွား‌ရေးဝန်ကြီးများ အထူးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Pan Sorasak က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ၊ အာဆီယံ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ဝန်ကြီးများက အာဆီယံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ အလွန် စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ရေးရာများတွင် အာဆီယံ၏ စီးပွားရေးထိခိုက်မှု နည်းပါးအောင်‌ ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုတွင် အာဆီယံ၏အချက်အချာကျမှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရေးတို့အပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးသည်။
ထို့ပြင် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများက အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ အင်ဒို-ပစိဖိတ် စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ ပူးပေါင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ ဒေသပြင်ပနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အာဆီယံ၏ အချက်အချာကျမှုနှင့် ကြားနေမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ အာဆီယံ ဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှု၊ အာဆီယံ၏အမြင်ဖြင့် အာဆီယံက ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ရန်တို့ကို ဆွေးနွေး သဘောတူညီခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးများက ဒေသတွင်းဘက်စုံ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက် (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP)သည် ကပ်‌ရောဂါအလွန် စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရာတွင် အထောက် အကူပြုသည့်အတွက် အဆိုပါ သဘောတူညီချက် အသက်ဝင်ရေးအတွက် အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ဝန်ကြီးများ ညီလာခံအတွက် ပြင်ဆင်မှုများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတု အစီအမံများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်သွယ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများကို သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ခဲ့ သည်။
ဝန်ကြီးများသည် အာဆီယံစီမံကိန်းများ၏အခြေခံ ကနဦးလုပ်ငန်းများနှင့် အာဆီယံစီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု အစီအစဉ်များကိုလည်း ဆက်လက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကိုဗစ်-၁၉အလွန် အာဆီယံစီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့စေ ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရာတွင် ကြိုတင်မျှော်မှန်းမထားသည့် ရှရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများ၏ စီးပွားရေးတုံ့နှေးလာမှုသည် အာဆီယံ နိုင်ငံအားလုံးအပေါ် စီးပွားရေးအရ သက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း အခြားအာဆီယံနိုင်ငံများနည်းတူ စီးပွားရေး အပေါ် သက်ရောက်မှုများ တွေ့ကြုံနေရကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေအနေများအရ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများကိုလည်း ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်နေရပါကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် အခက်အခဲများကို ကျော်လွန်ရေး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး တည်ငြိမ်တိုးတက်လာစေရေးအတွက် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ အထောက်အကူနှင့် နားလည်မှုသည် အရေးကြီး ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ အာဆီယံနိုင်ငံများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို နားလည်စာနာကာ ဝိုင်းဝန်း အထောက်အကူပြုစေလိုကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် အာဆီယံ၏ စီးပွားရေးမဏ္ဍိုင်အောက်တွင် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်ကိစ္စများကို တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းနှင့် ဒေသတွင်း စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှု အစီအစဉ်များတွင်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
အစည်းအဝေးကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၏ သဘာပတိ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Pan Sorasak နှင့်တွေ့ဆုံ၍ အာဆီယံစီးပွားရေးမဏ္ဍိုင် အောက်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံအနေဖြင့် ဆက်လက်ဆောင် ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့အကြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ဆက်လက်အပြီးသတ် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား အခွန်နှစ်ထပ်ကောက်ခံမှုရှောင်ရှားရေး သဘောတူစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းရန် ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း ဆွေးနွေးသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. Muhammad Lutfi နှင့်လည်းတွေ့ဆုံ၍ ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ စားအုန်းဆီများ ပုံမှန်တင်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် လတ်တလော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ပြည်ပတင်ပို့ခွင့် ပိတ်ပင်ထားမှုအပေါ် ဖြေလျော့မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ စိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်များ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ရေ တို့ကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည်။
ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Samsem Samalapa နှင့်လည်း တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်ကိစ္စနှင့် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးတွင် ကျပ်ငွေနှင့် ထိုင်းဘတ်ငွေတို့ကိုအသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုထိရောက်စေရေး ကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ စက်မှု နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Bountheung Douangsavanh နှင့်တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် မေ ၁၇ ရက် ညနေခင်းတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ် ရေးဝန်ကြီး H.E. Muhammad Lutfi ကတည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့ အခြား အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများနှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်သည်။
အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံအရာရှိတို့ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။